မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂၀)
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ဖြစ်တဲ့ Show one’s hand, Play one’s cards နဲ့ Lay down one’s cards တို့ကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Show one’s hand
Show (ပြတာ)၊ one’s hand (လူတဦးတယောက်ရဲ့ လက်) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးတယောက်ရဲ့ လက်ကိုပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ဖဲကစားရာကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ ဖဲကစားရာမှာ အများအားဖြင့် ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ဖဲတွေကို ကိုယ်နဲ့ ကစားတဲ့တခြားလူတွေ မမြင်ရလေအောင် ကိုယ်နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ကိုင်ထားလေ့ရှိပေမယ့်၊ ဖဲကစားသူက သူကိုင်ထားတဲ့ ဖဲတွေကို တခြားလူတွေသိအောင် ချပြတယ်ဆိုရင် Show one’s hand လို့ ရည်ညွှန်းပြောနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အရင်က ထုတ်မပြောတာ၊ အသိမပေးဘဲ ဖွက်ထားတာ၊ လျှိူ့ ဝှက်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊၊ အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ အစီအစဉ်၊ အကြံအစည် စသဖြင့်တို့ကိုလူတွေသိအောင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊အကြံအစည်တွေ သဖြင့်တို့ကိုအများသိအောင် ထုတ်ဖော်ပြောလေ့ မရှိခဲ့ပေမဲ့ ၊ မကြာသေးမီက (၁၉) ကြိမ်မြောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ညီလာခံမှာ သမ္မတ Xi Jinping က အနာဂတ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကို ဘယ်လို ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာကို ချပြခဲ့ရာမှာ Washington Post သတင်းစာကြီးက Xi showed his hand, now it's time for Trump to play his cards in Asia လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
In business dealings, it’s important not to show one’s hand right away.
စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အကြံအစည်းတွေ၊ အယူအဆတွေကို စစချင်းပဲ အသိပေးထုတ်မပြောဘို့က အရေးကြီးတယ်။
(၂) Play one’s cards
Play (ကစားတာ)၊ one's cards (လူတဦးရဲ့  လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဖဲတွေ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က လူတဦးတယောက်ရဲ့  လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖဲချပ်တွေကို ကစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖဲကစားရာမှာ ဖဲကစားသူအနေနဲ့ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖဲတွေကိုအကောင်းဆုံး ဘယ်လိုနိုင်အောင် ကစားမလဲဆိုတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ကစားလေ့ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းတော့ ဖဲကိုကစားရုံတင်မဟုတ်ဘဲ နိုင်အောင်လည်း ကစားဖို့ လိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနေရာမှာ Play one’s cards right ဒါမှမဟုတ် Play one’s cards well လို့လည်း သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိအောင် ကစားတတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို Washington Post သတင်းစာကြီးက စောစောက ကိုးကားခဲ့တဲ့ ခေါင်းကြီးမှာပဲ သုံးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု သမ္မတ Trump အနေနဲ့ အာရှခရီးစဉ် ထွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း တရုတ်သမ္မတဘက်ကတော့ သူ့နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကို ထုတ်ပြောနေပြီ။ ဒါကြောင့် အာရှခရီးစဉ်မှာ Trump က အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုခြေလှမ်းတွေယူမလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ရေးသားခဲ့ရာမှာ Now it's time for Trump to play his cards in Asia လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအီဒီယံအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Myanmar needs to play its cards right on Rakhine issue.
ရခိုင်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိပြီး ထိရောက်မဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဖို့လိုအပ်တယ်။
(၃) Lay down one’s cards
Lay down (အောက်ကိုချတာ)၊ one’s cards (လူတဦးတယောက်ရဲ့  လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ဖဲချပ်တွေ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးတယောက်အနေနဲ့ သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ဖဲချပ်တွေကို အောက်ကိုချပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက စောစောက တင်ပြခဲ့တဲ့ Show one’s hand နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ တနည်းတော့ ဖဲချပ်တွေကို ဖွက်မထားတော့ဘဲ ကိုယ့်မှာ ဘာဖဲချပ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပဲ ချပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူတဦးအနေနဲ့ အရင်က လျှိုထားတာ၊ လူတွေကို ထုတ်ပြီးမပြောတာ၊ မသိအောင်ထားတာတွေကို အများသိအောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ချပြတာ၊ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping က တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ညီလာခံမှာ သူ့နိုင်ငံရဲ့  ရှေ့ အနာဂတ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ချပြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း The Pittsburgh Gazette သတင်းစာကြီးက China’s Xi Jinping laid down his cards, now it’s Trump's turn to play his hand in Asia - တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping ကတော့ သူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကို ထုတ်ပြောခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အာရှခရီးစဉ်အတွင်းမှာ Trump အနေနဲ့ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး တုံ့ပြန်ရဖို့အလှည့် ရောက်လေပြီလို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John laid down his cards and spoke honestly about his financial difficulties.
John က သူ့ရဲ့  ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖြစ်မှန်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ထုတ်ဖော်ချပြခဲ့တယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idioms အသုံးတွေက Show one’s hand, Play one’s cards နဲ့ Lay down one’s cards တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၁၅)
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၁၆)
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၁၇)
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၁၈)
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၁၉)